I-Apple iyeka yonke intengiso entsha yaseTurkey njengoko imali yaseTurkey iwa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTurkey zokuPhula » I-Apple iyeka yonke intengiso entsha yaseTurkey njengoko imali yaseTurkey iwa
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Xanduva • Shopping • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ixabiso lentengiso yeemveliso ze-Apple eTurkey libandakanya iirhafu ezininzi kunye neefizi, ngenxa yoko zidla ngokubiza phezulu kakhulu kunase-United States.
Ukutshona okubukhali kwe ikarikuniImali yesizwe inyanzelise inkampani yobuchwephesha baseMelika iapile ukunqumamisa ukuthengisa kwazo zonke iimveliso zayo ngewebhusayithi esemthethweni yaseTurkey.
iapile kulindeleke ukuba inyuse amaxabiso ukuphelisa ukuhla kwexabiso leemveliso zayo ngenxa yokuwa kweLira yaseTurkey, eye yawela kwirekhodi eliphantsi le-13.5 lira ngedola izolo.
okwangoku, iapileIvenkile yaseTurkey ekwi-intanethi ayivumeli abasebenzisi ukuba bongeze iimveliso kwinqwelo, nazo zonke izinto eziphawulweyo 'azifumaneki okwethutyana.'
Ixabiso lentengiso ye iapile iimveliso kwi ikarikuni ibandakanya iirhafu ezininzi kunye neefizi, ngoko ke zidla ngokubiza phezulu kakhulu kunase-United States. Nangona kunjalo, emva kokuba i-lira yehle nge-15%, imeko yabuya umva, nto leyo eyakhokelela ekubeni i-Apple imise yonke intengiso de ilungise amaxabiso.
Imali yaseTurkey ikwazile ukubuyisela ezinye zeelahleko zayo namhlanje, inyukela kwi-12.6 lira ngedola nge-09: 19 GMT, iphawula inzuzo ye-0.8% ngaphezu kosuku lwangaphambili. Sekunjalo, ilahleko yayo ngokubhekiselele kwi-greenback ime kwi-40% kulo nyaka, kunye nokuhla kwe-19% kwiintsuku ezilishumi ezidlulileyo kuphela.